Huawei C8500 အတွက် အဆင်အပြေဆုံး Android version ? — MYSTERY ZILLION
Huawei C8500 အတွက် အဆင်အပြေဆုံး Android version ?
June 2012 edited June 2012 in Android
C8500 အတွက် android version တစ်ခု အသုံးပြုချင်ပါတယ်
အဆင်အပြေဆုံးနဲ့ error အနည်းဆုံး English version လေးကို လမ်းညွှန်ပေးပါ။ Download ဆွဲရန် လမ်းကြောင်းလေး ပါ ရှဲပေးကြပါ။
Huawei ကထုတ်ထားတဲ့ official firmware 2.2 ပါ။ အနီရောင် button နှိပ်ရင် download box ကျလာပါလိမ့်မယ်။ လုံး၀ safe ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ဖုန်းမှာဝယ်ဝယ်ချင်းပါလာတဲ့ 2.1 version ပါ။ Huawei ကထုတ်တာပဲဖြစ်လို့အန္တရယ်မရှိပါဘူး။
ဒါကတော့ 4.0 ပါ။ လန်းပေမယ့် error တွေရှိနိုင်ပါတယ်။
2.1 နဲ့ 2.2 အတွက်က download ဆွဲရင်ရလာမယ့် zip ကိုဖြည်လိုက်ပါ။ dload ဆိုတဲ့ folder ကို SD Card ထဲထည့်ပါ။ ပြီးရင် vol up+power button+end call ကိုတွဲနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် step by step သွင်းသွားရုံပါပဲ။ error တက်ရင် battery ဖြုတ်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ပါ။
4.0 အတွက်က Rom Manager ကို download အရင်ဆွဲရပါမယ်။ ပြီးရင် Install Rom From SD Card
ထဲဝင်ပြီး ICS download ဆွဲလို့ရလာတဲ့ zip file ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
အကုန်လုံး English Language ပါ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့စစချင်းမှာတော့ တရုတ်စာတွေနဲ့ပြမှာပါ။
Update failed ပဲ ပြနေပါတယ်။ ၆ခေါက် ၇ခေါက်လောက်စမ်းပြီးပါပြီ။
8500s အတွက်မို့များဖြစ်နေလား မသိဘူး။
ကျွန်တော်ဖုန်းက ရိုးရိုး ၈၅၀၀ ပါ။
တစ်ခုပြောဖို့မေ့နေလို့။ SD Card ထဲမှာ dload folder ကလွဲလို့တစ်ခြားဘာ files မှရှိနေလို့မရဘူးဗျ။ တစ်ခြား data
တွေရှိနေရင် update failed ဖြစ်တက်တယ်။ dload မထည့်ခင် format ချပေးလိုက်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ နောက်ဆုံးပေးတဲ့ ၂.၂ လေးနဲ့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
နောက်ဆုံးပေးတဲ့ ၂.၂ ဆိုတာအပေါ်ကလင့်ကပဲ download လုပ်ရတာလား။ ကျွန်တော်ဆွဲပြီး upgrade လုပ်တာ Update Faild ပဲဖြစ်နေတယ် format လုပ်ပြီးကူးထည့် တာလဲ မရဘူး။ ကျွန်တော့ဖုန်းက c8500 ပါ c8500s မပါဘူး။ ကူညီပါဦးခင်ဗျာ...
Firmware သွင်းတာကတော့အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ steps တွေအတိုင်းပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်တာတွေက -
(၁) SD Card မှာသွင်းထားတဲ့တစ်ချို့ application တွေကသူ့ဟာသူ folder ပြန်ဆောက်တာတွေရှိတယ်။
ဖုန်းကိုပိတ်ထားပြီး Card Reader တစ်ခုခုကနေ dload folder ထည့်ကြည့်ပါလား။
(၂) SD Card မှာ error ရှိနေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ right clk-->Properties-->Tools-->Check Now မှာနှစ်ခုလုံးအမှန်ခြစ်ထည့်ပြီး fix လုပ်ကြည့်ရင်တော့ရနိုင်တယ်။
(၃) ၁ ခေါက် ၂ ခေါက်လောက်နဲ့ရချင်မှလည်းရမယ်။ ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေ၅ခါလောက်လုပ်မှရသွားတာတွေလည်းရှိတယ်။
MMAS မှာတော့ Android 2.2 တင်ပေးထားတဲ့ post တစ်ခုတွေ့တယ်။ ဒါနဲ့စမ်းကြည့်ပါလား။
June 2012 edited July 2012 Registered Users
မရသေးဘူးဗျ ကျွန်တော်စမ်းတာ ၁၀ ခေါက်မကတော့ဘူး။
SD card ကို check now လုပ်ပြီးလည်းမရဘူး။ တခြား SD card နဲ့လည်းစမ်းကြည့်တယ်မရဘူးပဲ။ Card reader နဲ့ format လုပ်ပြီးစမ်းလည်းမရဘူး။
ခုကျွန်တော် http://www.myanmarmobileapp.com/?p=10902 စမ်းကြည့်တော့ Flash Clockworkmod Recovery လုပ်တာ ဖုန်းမော်ဒယ်ရွေးခိုင်းနေတယ်။ ရွေးရမယ့်ထဲမှာ c8500 မပါဘူး။ ဘယ်ဟာရွေးရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်သွင်းထားတာ ROM Manager Premium 4.4.0.7 ပါ။ တခြား ROM Manager version တွေသွင်းတာတော့ Parse Error ပဲပေါပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာ ROM Manager Premium နောက်ပိုင်း version တွေက Android 2.1 မှာသွင်းမရဘူးနဲ့တူတယ်။
ခုကျွန်တော့် ROM Manager ထဲမှာတွေ့တဲ့ Huwei U8220/U8230 model ကိုရွေးပြီးစမ်းကြည့်တာ Download and Install တော့ပြီးသွားပါတယ်။ Current Recover: ClockworkMod 3.1.0.1 လို့ပေါ်လာတယ်
ဒါပေမယ့် Reboot လုပ်ပြီး Recover Mode ကိုဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ Recover Mode တက်လာရင် Huwei Logo ကြီးပဲ အဖြူရောင် Background နဲ့ပေါ်နေတယ်။
ကျွန်တော့် mobile လည်း c8500ပါ။
ကတော့ ကျွန်တော်လည်း အဆင်မပြေခဲ့ပါ။
C8500 ရဲ့ LCD Driver နဲ့ U8220/U8230 တို့ရဲ့ Driver တွေကမတူပါဘူး။ နဂို Driver files မရှိတော့တဲ့အတွက် Android ထဲဝင်ဖို့လုပ်တိုင်း white screen ပေါ်နေတာပါ။ Original 2.1 ပြန်သွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ MMAS က 2.2 သွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပြန်လုပ်လိုက်ပါ။
http://www.myanmarmobileapp.com/?p=1922 က 2.2 ကိုသွင်းချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် ကျွန်တော့် Connection မကောင်းလို့ upgrade file ဆွဲထားတာလေးရှိရင်mediafire နဲ့ရှဲပေးပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မှာ အောက်ကလင့်တွေ့လို့ ဆွဲတာရတယ်။
Upgrade လုပ်တာလည်းရပါတယ်။ ခု 2.2.1 ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် 3G Network မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
APN Setting လည်းထည့်ပြီးပါပြီ။ အင်တာနတ်ကိုဖုန်းနဲ့လည်းမရဘူး၊ Computer နဲ့လည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကူညီကြပါဦး။
3G Network Signal မပေါ်တာလား။ အဲဒါဆိုရင်တော့ Firmware နဲ့ဆိုင်လိမ့်မယ်။
http://www.myanmarmobileapp.com/?p=1922 ဒီဟာကကျွန်တော့်ဆီမှာ Download ဆွဲထားတာမရှိလို့ပါ။
မြို့ထဲမှာတော့ Ruby Mart အပေါ်ထပ်ကဆိုင်ရယ်၊ မြို့တော်ခန်းမဘေးကဆိုင်ရယ်လိုင်းကောင်းပါတယ်။
When I change APN user name to [email protected], it is working now.
2.2.1 Upgrade လုပ်ပြီးတော့ c8500 2.1 တုန်းကသွင်းထားတဲ့ PCSuite software ကနေ connect လုပ်လို့မရတော့ပါ။ Modem software ကနေတော့ Connect လုပ်လို့ရပါတယ်။ Driver မှားနေတာလား၊ PCSuite software version ပဲမကိုက်တာလားမသိဘူး။ 2.1 က contacts တွေကို PCSuite နဲ့ export ထုတ်ထားတာ ဘယ်လို Import ပြန်လုပ်လို့ရမလဲ ကူညီကြပါဦး။
PC Suite ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်သွင်းကြည့်ပါလား။ ကျွန်တော့် fri တစ်ယောက်ဖြစ်ဘူးတယ်၊ firmware update လုပ်ပြီးတော့ modem software သုံးလို့မရတော့တာ။ သူ့တုန်းကအဲလိုလုပ်ကြည့်တာအဆင်ပြေသွားတယ်။
ကိုအန်ကိုင်းရေ ကူညီပါအုန်း...Huawei C8500s ကို ဗားရှင်း မြှင့်လို့ရမလား ခင်ဗျား...ရရင် လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးနဲ့ share ပါအုန်း..ကျေးဇူး..
Ko Unkind ရေ U8150 အတွက် နည်းလမ်းလေးကူညီပါ